Nguwuphi umahluko phakathi kweinki esekwe emanzini kunye neoyile esekwe kwioyile kumatshini wefoto?
I-inki esekwe kwi-oyile kukungxenga i-pigment kwi-oyile, enjengeoyile yezimbiwa, ioyile yemifuno, njl njl. I-inki ibambelela embindini ngokungena kweoyile kunye nomphunga kwindlela yokushicilela; I-inki esekwe emanzini isebenzisa amanzi njengendawo yokusasaza, kwaye i-inki ikwindawo yokuprinta i-pigment incamathele ...
Izibonelelo ezine zetekhnoloji ye-piezoelectric inkjet technology
Njengoko sonke sisazi, itekhnoloji ye-inkjet ye-foam eshushu ilawula imarike yefomathi enkulu ye-inkjet iminyaka emininzi. Ngapha koko, itekhnoloji ye-inki ye-piezoelectric isete uguquko kwitekhnoloji ye-inkjet. Isetyenziswe kubashicileli bedesktop ixesha elide. Ngokuphucuka nokukhula ...
Njengeyona nto iphambili kumatshini wokushicilela we-inkjet, uzinzo lwentloko yokuprinta ngokungathanga ngqo kumisela umgangatho womatshini. Xa iindleko ezizinzileyo zentloko yokuprinta ziphakame kakhulu, ungabandisa njani ubomi benkonzo ...